कट्रिनासँगको सम्बन्ध टुटिसक्यो भनेर मैले कहिले भने ? Archives - Nepal Japan
नेपाली समय : 10:18:14
जापानी समय : 01:33:14
Tag: कट्रिनासँगको सम्बन्ध टुटिसक्यो भनेर मैले कहिले भने ?
कट्रिनासँगको सम्बन्ध टुटिसक्यो भनेर मैले कहिले भने ?
Posted on August 21, 2016 by Yadav Devkota
बलिउड अभिनेता रणवीर कपुर र अभिनेत्री कट्रिना कैफबीचको सम्बन्धले ब्रेकपको रुप पाईसकेको खबर लामोसमय देखि चलेको हो । उसो त यो जोडि पछिल्लो समय एक अर्कालाई वेवास्ता गरिरहेको भिडियो र तस्वीर पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
तर रणवीर कपुरले आफूहरुको बीचको सम्बन्ध फेरि सस्पेन्स थपिदिएका छन् । एक अन्तर्वार्ताको क्रममा रणवीर कपुरले पहिलो पटक कट्रिनासँगको सम्बन्धको बारेमा खुलेर कुरा गरेका छन् ।
अन्तर्वार्ताको क्रममा उनले भने – “मैले कहिल्यै कतै पनि हाम्रो सम्बन्ध टुटेको बारेमा भनेको छैन, म मेरो निजी जिन्दगीलाई निकै माया गर्छु ।” सम्बन्ध टुटिसकेपछि पनि कट्रिनासँग फिल्ममा काम गर्नको लागि कुनै आपत्ति भएन ? भन्न प्रश्नमा उनले भने – कट्रिना आफ्नो कामको लागि सधैँ उत्साहित हुने हुँदा उनीसँग काम गर्न मज्जा आउँछ ।
यसअघि दीपिका पादुकोणसँगको सम्बन्ध टुटेपछि पनि रणवीरले ’ए जवानी हे दिवानी’ र ’तमाशा’ जस्ता फिल्ममा काम गरेका थिए । रणवीर र कट्रिना अभिनित फिल्म ’जग्गा जासूस’ आगामी वर्ष अप्रिल ७ मा प्रदर्शनमा आउनेछ ।
रणवीर संग ब्रेकअप भएपछी आदित्य संग नजिकिदै कट्रिना
Posted in कला/मनोरन्जन, वलिउडTagged कट्रिनासँगको सम्बन्ध टुटिसक्यो भनेर मैले कहिले भने ?